【 CODES GENSHIN IMPACT 】 La cusboonaysiiyay MAANTA ▷ Luulyo 2022
Claymores iyo Mandobles
Xeerarka Genshin Impact
Hi Adventurer! Maadaama aad raadinayso codes abaal-marinnada iyo ugu dhakhsaha badan GEMS in Genshin Impact halkaan waxaan idiin kaga tagayaa liis aad u kala duwan oo kuwan kamid ah, xasuusnoow in qaarkood dhici karaan, dhaqso u furto, qaarna ay ansax yihiin hadba gobolka, waxaan ku talinayaa in aad isku daydo dhamaantood, maadaama aan hubno in 80% tani ay tahay. Liiska koodku had iyo jeer waa firfircoon yahay. Ha iloobin inaad wax arki karto hagayaal, khariiddada is-dhexgalka, qalabka, suxuun laysku garaaco, armas, jilayaasha, cadaawayaasha, ergooyinka, farshaxanada, riyooyin iyo wax badan oo ku saabsan genshin impact shabakada
Liiska Koodhadhka Firfircoon ee loogu talagalay Genshin Impact
GENSHINGIFT: 50 Protogems bilaash ah iyo 3 geesiyaal wits.
SBNBUK67M37Z: 30 Protogems iyo 5 tacaddiye bilaash ah EXP shay (loo shaqeeya kaliya hal mar ciyaartoyda cusub).
MS7C3SV8DMZH: 60 Protogems bilaash ah iyo 5 waayo-aragnimo Adventurer ah (koodka la helay Maarso 29, wali waa shaqaynaya).
AB7CKBVQULE5: Waxaad helaysaa 100 Protogems bilaash ah iyo 10 macdan oo sifayn qarsoodi ah (waxay shaqeynayaan kaliya ilaa Maarso 19).
LBNDKG8XDTND: Waxaad helaysaa 100 Protogems oo bilaash ah iyo 10 macdan sifayn qarsoodi ah (oo shaqaynaya ilaa Oktoobar 4, 2022)genshin1006u - waxaad helaysaa 30 protogems + 15 Adventure EXP bilaash ah (kaliya wuxuu ka shaqeeyaa Yurub).
genshin1006a - waxaad ku helaysaa 30 protogems + 15 Adventure EXP bilaash ah (kaliya wuxuu ku shaqeeyaa Ameerika).
genshin1006s - Waxaad ku helaysaa 30 Protogems + 15 Adventure EXP bilaash ah (kaliya wuxuu ku shaqeeyaa Aasiya).
GenshinMHY0O - waxaad ku helaysaa 30 protogems bilaash ah (kaliya Yurub ayuu ku shaqaynayaa).
GenshinMHY0M - waxaad ku helaysaa 30 protogems bilaash ah (kaliya wuxuu ku shaqaynayaa Ameerika).
GenshinMHY0I - waxaad ku helaysaa 30 protogems bilaash ah (kaliya waxay ku ansaxaysaa Aasiya).
GENSHINMHY0O - Waxaad ku helaysaa 30 protogems bilaash ah (kaliya waxay ku shaqaynayaan PC iyo mobilada).
GenshinZHB30 - waxaad ku helaysaa 160 protogems bilaash ah.
Genshin0928N - Waxaad ku helaysaa 60 protogems iyo 10.000 berry ah bilaash (loo shaqeeya server-yada Ameerika oo keliya).
Genshin0928E - Waxaad ku helaysaa 60 protogems iyo 10.000 berry bilaash ah (loo shaqeeya kaliya server-yada Yurub).
Genshin0928A - Waxaad ku helaysaa 60 protogems iyo 10.000 berry ah lacag la'aan (loo shaqeeya adeegayaasha Aasiya oo keliya).
GENSHIN1111 – waxaad ku helaysaa 60 protogems iyo 10.000 berry ah bilaash
GENSHINGIFT - Waxaad ku helaysaa 50 protogems iyo 5 shay oo khibrad leh jilayaashaaga bilaash.
GENSHIN1006A - Waxaad ku helaysaa 30 borotojimyo iyo 5 xidhmo waayo-aragnimo bilaash ah (loo shaqeeya kaliya server-yada Ameerika).
GENSHIN1006U - waxaad ku helaysaa 30 borotojimyo iyo 5 xidhmo waayo-aragnimo oo bilaash ah (loo shaqeeya kaliya server-yada Yurub).
GENSHIN1006S - Waxaad ku helaysaa 30 protogems iyo 5 xidhmo waayo-aragnimo bilaash ah (loo shaqeeya adeegayaasha Aasiya oo keliya).
GOLNXLAKC58 - waxaad ku helaysaa 50 borotojiyadeed bilaash ah (wuxuu shaqaynayaa ilaa Noofembar 30, dhammaan gobolada iyo aaladaha).
eATDgIXLD56 – waxaad ku helaysaa 100 protogems iyo 50.000 berry ah bilaash
nBEm3myAL2b – waxaad ku helaysaa 100 protogems iyo 50.000 berry ah bilaash
G3tQq6TOqmE – waxaad ku helaysaa 100 protogems iyo 50.000 berry ah bilaash
5KVeIbSxDUU - waxaad ku helaysaa 100 Protogems iyo 10 Mystic Boost Minerals bilaash ah (qof walba u shaqaynaya).
jsSK8n23jzR - waxaad helaysaa 100 Protogems, 10 macdan xoojin ah oo qarsoodi ah oo bilaash ah (qof kastaa ansax u ah).
153YUSENH - waxaad ku helaysaa 30 Protogems iyo 5 shay oo waayo-aragnimo Adventurer ah oo bilaash ah (qof kasta u shaqaynaya).
dU2mhjQL1ZT - waxaad helaysaa 100 borotojim ah iyo 5 shay oo EXP ah oo bilaash ah (qof kastaa ansax u ah).
GSIMPTQ125 – Waxaad helaysaa 140 Protogems, 10.000 Blackberries, 5 Adventurer EXP shay, iyo 3 Halyeyga Halyeyga ah.
153YUSENH – Waxaad helaysaa 140 Protogems, 10.000 Blackberries, 5 Adventurer EXP shay, iyo 3 Halyeyga Halyeyga ah.
GENSHINGIFT – Waxaad helaysaa 140 Protogems, 10.000 Blackberries, 5 Adventurer EXP shay, iyo 3 Halyeyga Halyeyga ah.
GENSHINGIFT - 50 Protogems iyo 3 geesiyaal geesiyaal bilaash ah.
GSIMPTQ125 – 60 Protogems iyo 10.000 blackberry oo bilaash ah.
153YUSENH - 30 Protogems iyo 5 Khibrad Adventurer oo bilaash ah.
KTNSCQWW922M - 100 Protogems iyo 10 shay oo sifayn qarsoodi ah oo bilaash ah.
ET7ADQFF8KJR - 100 Protogems iyo 5 Hal-abuurka Halyeyga bilaashka ah.
PSNTC8FEQK4D - 100 Protogems iyo 50.000 Mora bilaash ah.
GS6ACJ775KNV - 60 Protogems iyo 10.000 Blackberry bilaash ah.
TT7BVJNPL249 - 60 Protogems bilaash ah.
ATPTUJPP53QH - 100 Protogems bilaash ah iyo 50.000 berry ah.
CBNXRD6S7H3N - 100 Protogems bilaash ah iyo 50.000 berry (kaliya waxay ku shaqeeyaan gobolka Shiinaha).
4BNSD3675J8D - 100 Protogems bilaash ah iyo 5 geesiyaal geesiyaal ah.
EBPWQU6SNZ22 - 100 Protogems bilaash ah iyo 5 geesiyaal geesiyaal ah (kaliya waxay ku ansaxayaan gobolka Shiinaha).
FS6SU367M279 - 100 Protogems bilaash ah iyo 10 qalab sifeyn ah.
2T7E9CPA7YJE - 100 Protogems bilaash ah iyo 10 walxood oo lagu sifaynayo (kaliya waxay ku shaqeeyaan gobolka Shiinaha).
WTNTBYSZJNRD: 100 Protogems bilaash ah iyo sifaynta macdanta x10.
8A6ABHTH2N9Z: 100 Protogems bilaash ah iyo geesiga x5.
UTNBBGSZ3NQM: 100 Protogems bilaash ah iyo 50.000 berry ah.
© 2022 Codes Genshin Dhammaan xuquuqaha way xifdisan yihiin